सगुनको आइपिओ नखुल्दै लगानी गर्न ५० करोडको प्रतिवद्धता
अर्थ संसार वासिङ्टन डीसी–अमेरिकामा उदियमान कम्पनीका रुपमा सुरु भएको सामाजिक कमर्स सगुन डटकमले अमेरिकी सेक्युरिटिज् तथा एक्सचेन्ज कमिसन (एस्‌ईसी) मा रेगुलेशन ए प्लस व्यवस्थाअन्तर्गत मिनी आइपीओ खुल्ला हुनु अगाडी ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आशय प्राप्त गरेको छ। मिनी आइपिओको आह्वान पत्र जारी नगर्दै यतिधेरै रकमको प्रतिवद्धता आएको हो । ...
नवराज घिमिरे अमेरिकालगायत दुनियाभरका धेरै सेयर बजारका लगानीकर्ताले विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बसेर अनलाइनबाट सेयर किनवेच गर्न सक्छन । विडम्वना नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ सेयर किनवेच गर्न २०५० माघयता व्रोकरकै कार्यालय धाउनु पर्ने वाध्यता छ । ...
सुबिसु १७ औं वर्षमा
अर्थ संसार काठमाडौं– इन्टरनेट, नेटवर्क र टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केवलनेट १७ आंै वर्षमा प्रबेश गरेको छ । सन् २००१ देखि केबल टिभीबाट सेवा सुरु गरेको सुबिसुले डिजिटल टिभी, इन्टरनेट, इन्टरनेट टिभी ओभर द टप, र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ...
टाई १० सेकण्डमा कसरी लगाउने ? हेर्नुहोस् सिक्नुहोस्
अर्थसंसार काठमाडौँ – बजारमा विभिन्न थरिका टाईहरु पाईन्छन् । विशेषगरी टाई कोट र पेन्टमा लगाउने गरिन्छ । आधुनिक कार्यालय तथा बैंकहरुमा टाई अनिबार्य जस्तै भइसकेको छ । विभिन्न सभा समारोह तथा शुभ कार्यमा यसको प्रयोग झन बढेको छ । कतिपयले यसलाई इज्जत धान्ने साधनका रुपमा समेत लिन्छन् । स्कुले केटाकेटीले समेत टाई लगाउने गर्छन् । ...
ब्लुबुक नविकरण अब घरैमा, १०१ सेवाले दिँदैछ यस्तो सुविधा
अर्थसंसार काठमाडौँ – के तपाई ब्यवसायिक कामले व्यस्त हुनुहुन्छ ? कार्यव्यस्तताको कारण समयमा आफ्नो ब्लू बुक नविकरण गर्न भ्याउनुभएको छैन ? लाईसन्सको फर्म घण्टौ लाईनमा बसेर बुझाउन दिक्क लागिरहेको छ ?अब तपाईंको तनाव कम हुनेछ । काठमाडौँको डिल्लिबजारमा सुरु भएको छ १०१ सेवा । यसका कर्मचारीले तपाईंको ब्लु बुक घर वा कार्यालयमै आएर लैजान्छन् । नविकरण गरेर तपाईंलाई ल्याइदिने छन्...
वल्र्डलिंकले ल्यायो इन्टरनेटमा ६ गुणा डाटा, तीन महिना आइपी टिभी, जडान र राउटर निशुल्क, सेटअप बक्समा ५० प्रतिशत छुट
अर्थ संसार काठमाडौं–वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सले नयाँ बर्षको अबसरमा इन्टरनेट जडान गर्ने ग्राहकलाई ६ गुनासम्म थप डाटा उपलब्ध गराउने अफर सार्बजनिक गरेको छ । यस अफरमा ग्राहकले निशुल्क जडान सुविधा पाउने छन् । यस्तै राउटर र तीन महिनासम्म इन्टरनेट प्रोटोकल (आइपी) टिभीसमेत निशुल्क उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । ...
टेलिकमले सुरु गर्यो फोर जी सेवा
अर्थसंसार काठमाडौँ–प्रविधिमा बढ्दो विकाससँगै नयाँ सेवा र सुविधाहरु आईरहेका छन् । नेपाल टेलिकमलले मोबाइलमा फोर जी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । हालसम्म नेपालमा थ्रि जी र टु जी सेवा मात्र सञ्चालनमा आइरहेको थियो । टेलिकमका उपभोक्ताले सुरुवातमा ३२ दशमलव ४ एमबीपीएस गतिमा इन्टरनेट चलाउन पाउनेछन् । ...
अर्थ संसार धादिङ– कृषि औजार पाएपछि यतिखेर धादिङ कुम्पुर र धुषा गाविसका स्थानीय किसानहरुमख्ख भएका छन् । अक्सफामको सहयोगमा प्रयत्नशील सामुदायिक विकास समाज प्रयास नेपालले सञ्चालन गरेको भूकम्पप्रतिकार्य परियोजना अन्तरगत सञ्चालित जीविकोपार्जन कार्यक्रम परियोजना अन्तरगत किसानहरुलाई कृषिऔजार वितरण गरिएको हो । ...